Tag: trade show dumba | Martech Zone
Tag: trade show dumba
Mugovera, Nyamavhuvhu 3, 2019 Mugovera, Nyamavhuvhu 3, 2019 Douglas Karr
Zviratidziro zvekushambadzira zvine zvazvakanakira izvo zvinoita kuti vadzokere zvakanyanya pane investment yeako kushambadzira show. Vateereri ndivo vanonyanya kukosha, varipo vanogona kunge vane bhajeti, uye makambani ari kutumira vashandi vavo kunzvera sarudzo dzekutenga. Icho trifecta yezvakanaka. Izvo hazviuye pasina mubhadharo, zvakadaro. Kurendesa dumba nzvimbo ndeyekutanga uye kushandira kuti uwane traffic kumatumba ako ihondo… pakati pako newe wega
8 Elements yeiyo Inobudirira Yekutengesa Ratidza Booth Dhizaini
Chipiri, May 31, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kunyange isu tiine kuwedzera kwekutarisa pane zvemukati marongero evatengi vedu, isu takagara tichivakurudzira kuti vaende kumabhizimusi misangano nemitambo yekutengeserana. Zviratidziro zvekutengeserana zvine pesvedzero inoshamisa pakuvaka ruzivo rwechiratidzo chako nevateereri vakatapwa izvo zvinonyanya kukodzera kutsvagisa sarudzo yavo inotevera yekutenga pane mushanyi wepakati kune yako saiti. Muchokwadi, 81% yevatengesi vanoratidza vane masimba ekutenga uye 99% yevatengesi vakawana kukosha pakuve